‘हत्या भएका आलम भारतले मागेका व्यक्ति’
२०७६ जेठ ११ शनिबार
नारायण अधिकारी | २०७५ असोज ४ बिहीबार | Thursday, September 20, 2018 १२:५५:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं- सुनसरीको भुटाहामा रैयान नेशनल स्कुल चलाउँदै आएका खुर्सीद आलमको बिहीबार अपरान्ह गोली हानी हत्या भएपछि हामीले हत्याको सेरोफेरो र यसको अनुसन्धानबारे ‘अपडेट’ खोज्यौं। सोधखोज गर्दै जाँदा के पत्तो लाग्यो भने, मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले गोली प्रहार गरी हत्या गरेका आलमलाई २ दशक पहिलादेखि नै भारत सरकारले ‘पक्राउ गरेर पठाइदिन’ आग्रह गरिरहेको थियो।
भारतमा सन् १९९३ मा भएको मुम्बई बम विस्फोटमा संलग्न भएको आंशंकामा आलमलाई भारतीय प्रहरीले खोजिरहेको तर्क जिल्लास्थित उनका समकक्षीले नेपाल लाइभलाई बताए। आलमका मित्र तथा हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले आलमको विगतबारे जानकारी दिँदै भने ‘उनलाई भारतीय सरकारले खोजी गरिरहेको थियो। पक्राउ गरेर भारत सरकारलाई बुझाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरेको थियो। अहिले यस्तो घटना भयो। हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौं।’
गफार र आलम वि. स २०५४ मा जिल्ला विकास समितमा सँगै थिए। गफार अध्यक्ष थिए भने आलम जिविसमा मनोनित सदस्य। ‘त्यही बेला भारतीय प्रहरीले समेत आलमलाई बुझाइदिन जिविसमा आग्रह गरेको थियो’ गफारले भने, ‘सादा पोशाकका भारतीय प्रहरी नै आएर यस्तो आग्रह गरेको सम्झना छ।’
त्यतिबेला भारतीय प्रहरीको यस्तो आग्रहलाई जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरुले नकारेको भनाइ उनको छ। त्यो घटनाबारे आलमको परिवारलाई समेत जानकारी गराइएको थियो।
_x000D_ हत्या गरिएका आलमलाई त्यतिबेला सीमापारीका स्थानीय पत्रपत्रिकाले समेत आलोचना गर्दै समाचार छापेको गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिए। ‘मैले बुझेको यत्ति हो’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा छिरेर यसरी दिउँसै हत्या हुनु गम्भीर विषय हो। प्रहरीले यसबारे कडा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहबाट यस्तो सूचना आएपछि हामीले नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतलाई आलमबारे सोध्यौं। प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे प्रहरीका पूर्वप्रमुखलाई थाहा हुन सक्छ। तत्काल यो विषयमा केही भन्न सकिन्न। तर, घटनाको प्रकृति हेर्दा नियोजित रुपमा हत्या गरिएको भन्ने छ।’ आलमलाई गृहमन्त्री वामदेव गौतम भएको बेला पक्राउ गरेर भारत पठाइदिन भारतले आग्रह गरेको गापा अध्यक्ष गफारले बताए।
कसरी भयो गोली काण्ड?
_x000D_ आफ्नै स्वामित्वको स्कुल पढाएर उनी बजार गएका थिए। बजारबाट घर जाने क्रममा उनलाई दुईवटा मोटरसाइकलमा आएका चार जना भारतीयले गोली हानेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा नै हत्याराहरु सीमापारीबाट आएको देखियो’ घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक कमल खत्रीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सुरुमा दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ त्यसपछि कन्चटमा गोली हानेर हत्या गरिएको छ।’
आलम मोटरसाइकलमा छिमेकी अमिन मियाँसँग बजारबाट घर जान लागेका थिए। आफैंले सञ्चालन गरेको स्कुल नजिक पुगेपछि भारतीय नम्बरप्लेटकाे मोटरसाइकलमा आएको समूहले आलमको मोटरसाइकल छेकेर गोली हानेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
अचम्मको कुरा के भने, आलमको घटनास्थलमै मृत्यु भएपनि उनकै मोटरसाइकलको पछाडि बसेका मियाँलाई भने केही भएको छैन। मियाँलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ।
घटनास्थल भारतीय सीमा नाकाबाट ७ किलोमिटर टाढा छ। गोली प्रहार गरी भाग्ने क्रममा घुस्की नाकाको प्रहरीले हत्यारालाई रोक्न खोज्दा प्रहरी जवान शिव पौडेललाई समेत गोली प्रहार भएको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी पौडेलको तिग्रा र ढाडमा गरी ३ गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ।
घाइते प्रहरीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक खत्रीले बताए।
को हुन् आलम?
_x000D_ सुनरीको हरिनगर गाउँपालिका- २ का ४५ वर्षीय आलम स्कुल सञ्चालनका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थानीय राजनीति पनि गर्थे। उनी २०५३ तिर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। आलम तत्कालीन नेकपा एमालेका सुनसरी जिल्ला सल्लाहकार पनि हुन्।
जिल्ला विकास समितिको २०५४ सालमा मनोनित सदस्य समेत भएका व्यक्ति हुन् आलम। आलमका ३ छोरा र २ छोरी छन्। उनको विवाह सुनसरीपारी भारतको बलुवा भन्ने ठाउँमा भएको हो। तर मुम्बईमा भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा भारतीय प्रहरीले उनलाई पक्रन खोजिरहेकाले आलम घरपारि रहेको ससुराली गाउँ बलुवा समेत नजाने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
हत्याको विरोधमा प्रर्दशन
_x000D_ आलमको हत्या भएपछि सुनसरीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। हरिनगरका स्थानीयबासी गोली प्रहार भएको घटनाबारे तत्काल जानकारी गराउदा पनि सशस्त्र प्रहरी नआएको भन्दै आक्रोशित छन्।
_x000D_ सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि सुटर समूह भाग्दासमेत सशस्त्र प्रहरीले केही नगरेको भन्दै नेकपाका जिल्ला सदस्य लस्करी अन्सारीले नेपाल लाइभसँग आक्रोश पोखे। भने, ‘हत्यारा समाउन सकिन्थ्यो तर लापरवाहीले भागे।’
भुटाहामा शसस्त्र प्रहरी बलको डिएसपी कमान्डमा क्याप समेत रहेको छ।
स्थानीयले आलमको शव प्रहरीसँग खोसेर सडकमा राखेर प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। हरिनगरका विभिन्न ठाँउमा टायर बालिएको छ।
आक्रोश बढ्दै गएपछि अहिले जिल्लाका सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ।
(साथमा विनय बराकोटी, सुनसरीबाट)
मानवअधिकार समिति सभापति भन्छन् : मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत
संविधानको परिधिभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदहरुको अपिल
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए पदबाट राजीनामा, राष्ट्रपतिद्वारा सदर
गुजरातमा एक व्यावसायिक भवनमा आगो लाग्दा कम्तीमा १५ बालबालिकाको मृत्यु
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतगणाना सकियो, मोदीलाई अत्यधिक बहुमत
प्रधानमन्त्रीमा ओली आएदेखि संविधान विरोधी काम मात्रै : निधी
नयाँ अनाथालय वा बालगृह दर्ता नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
जनप्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन : चुनावअघि पार्टीको झण्डा बोकौंला, अहिले विकासको झण्डा बोकौं
भारतीय लोकसभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतभन्दा कम, भाजपाका सबै उम्मेदवार पराजित
ढोका थुनेर मेयरले कुटे कर्मचारी, भ्रष्टलाई ठेगान लगाउन कुटेको हुँ : मेयर
अमेरिकी राजदूतको ‘गफगाफ’: नागरिक तहमा विरोध, सरकार मौन
ओलीको संघीयता विरोधी तर्कका निरन्तरता
नेटवर्किङ ठगी : सरकारी वकिल कार्यालय अगाडि पैसाको बिटो बोकेर किन पुगे भारतीय?
यसरी सुरु भएको थियो विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता
गोकुल भर्सेस गोयबल्स
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु, के होला फैसला?
चेक बाउन्स-४ : मोडल खुस्बुलाई ३ महिना कैद फैसला
भारतीय लोकसभा : मोदीको पक्षमा चुनावी लहर, कांग्रेसको निराशाजनक नतिजा
सुर्खेतमा फेला पर्‍यो १२ थान बन्दुक
चेक बाउन्स-३ : ८५ लाख ऋण दिएर २ करोड असुल्ने सहकारीको दाउ
ट्राफिकको नयाँ योजना : अब मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने
सुल्झियो प्रहरीलाई टाउको दुखाइ बनेको त्यो १ घन्टा १४ मिनेट, यस्तो थियो घटना
म कसको घरमा बसेको छु मुख्य कुरा होइन, नेपालमा ६/८ ठेकेदारको एकाधिकार छ : प्रचण्ड
ढल्केबर बालक हत्याकाण्ड : १३ दिन बित्दा पनि पत्ता लागेन अपराधी
एग्जिट पोल नतिजा : एनडिए गठबन्धनको बहुमत आउने, मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने
कोपा अमेरिकाका लागि ब्रजिलको राष्ट्रिय टिम घोषणा
त्रिशुलीमा बस खस्दा मृत्यु हुनेकाे संख्या ५ पुग्याे, गम्भीर घाइते एक दर्जनलाई काठमाडौं ल्याइँदै [अपडेट]
रिस नियन्त्रण गर्ने १४ उपाय
बागमती तीर्थयात्रा आजबाट समापन [फोटो फिचर]
बैतडीमा जिप दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु, तीन घाइते
अलोकप्रियतालाई लुकाउन 'लोकप्रिय बजेट' ल्याउनु गलत : रामेश्वर खनाल [अन्तर्वार्ता]
कविता : अभाव
नेकपा महासचिवका ज्वाइँकै लागि ट्रमा सेन्टरमा नयाँ दरबन्दी, प्रक्रिया अघि नबढाउन लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेश
विमानस्थलमा बरामद भारतीय जाली नोटको परिमाण ७ करोड ६७ लाख ९४ हजार
कस्तो रह्यो नेकपाको एकवर्षे यात्रा?